A kagburu asọmpi iko mba ụwa n’afọ 2021
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Egwuregwu » A kagburu asọmpi iko mba ụwa n’afọ 2021
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ahụike • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Egwuregwu • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Asọmpi Iko Mbaụwa nke 2021 FINA ga-abụ asọmpi tozuru etozu maka asọmpi Tokyo
A manyere Japan ịkagbu ọtụtụ asọmpi egwuregwu dị ka usoro nchekwa
Ruo taa, Japan nọ n'ọnọdụ 39th n'ụwa n'ihe gbasara ikpe gbasara COVID-19
FINA kwuru na gọọmentị ga-achọ ozugbo ebe ndị ọzọ dị ka onye dochie anya
2021 A kagbuola iko World Cup nke ga-eme na Tokyo n'etiti Eprel 18 na 23.
The 2021 FINA mmiri World Cup ga-eje ozi dị ka asọmpi na-eru eru maka asọmpi Olympic na Japan n'oge okpomọkụ a, mana Swtù Igwu Mba Nile gwara ndị sonyere na ụnyaahụ na emechiri mmemme ahụ.
Akwụkwọ ozi a sitere na FINA kwuru na gọọmentị ga-achọ ozugbo ebe ndị ọzọ dị ka onye nnọchi, mana o doro anya na oge agaala n'oge a.
A ga-eme egwuregwu asọmpi asọmpi nke oge opupu ihe ubi nke 2020 na Tokyo na Japan na afọ a n'etiti July 23 na August 8. Na Machị 2020, Kọmitii Olimpik Mba Niile (IOC) kwupụtara mkpebi ị yigharịrị otu afọ nke asọmpi Olympic nke Oge Olimpik na Paralympic na Japan n'ihi COVID-2020 gbasara.
N'ihi echiche nke na-aga n'ihu na-agbasa akwụkwọ akụkọ coronavirus Japan, a manyere ịkagbu ọtụtụ asọmpi egwuregwu dị ka ihe nchekwa.
Izu abụọ gara aga, Kọmitii na-ahazi Mpaghara nke asọmpi Olimpik 2020 na Japan kwupụtara mkpebi ya igbochi ndị nkiri si mba ọzọ niile ịbịa Japan ịga asọmpi quadrennial nke a na-atụ anya nke ukwuu dịka usoro nchekwa megide mgbasa zuru ụwa ọnụ nke coronavirus. Mịnịsta okwu Olimpik na Japan Tamayo Marukawa gwara ndị nta akụkọ n'oge ahụ: "Mkpebi a sitere na mkpa ọ dị ịchekwa nchekwa n'etiti ọrịa a."
Ruo taa, Japan nọ n'ọnọdụ 39th n'ụwa n'ihe gbasara okwu ikpe COVID-19, nke dị ugbu a na 474,773. Ihe kariri mmadu 9,160 nwuru site na oria nje coronavirus na mba, ebe ihe kariri 446,410 natara oria.